Ọ dịghị ihe bụ ihe ndị ọzọ na-akụda mmụọ karịa nọdụrụ ala na-ekiri a ọhụrụ DVD ma ọ bụ video faịlụ na ifiọkde e nweghị ndepụta okwu n'asụsụ gị. Mgbe ụfọdụ, ọbụna ala ọkà okwu chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu ka DVD fim ma ọ bụ TV na-egosi nnọọ otú na ha nwere ike na ihe doro anya ịghọta ihe-eme ihe nkiri na-ekwu. N'okpuru ebe a bụ abụọ mfe ụzọ tinye ndepụta okwu ka DVD fim ma ọ bụ TV na-egosi.
Ngwọta 1: Download na Embed na ndepụta okwu Gị DVD
Ngwọta 2: Tinye ndepụta okwu N'oge DVD playback
Ibudata na embed sobtaitel gị DVD, ị kwesịrị ị na-eso 4 nzọụkwụ n'okpuru:
1. tọghata gị DVD ka video.
2. Download ndepụta okwu gị mkpa si Internet: ị nwere ike ma ịhụ ụfọdụ free sobtaitel weebụsaịtị ma ọ bụ jiri sobtaitel Downloaders. Maka ozi ọzọ, na-ezo aka isiokwu a: Olee otú ibudata ndepụta okwu ka DVD >>
3. Tinye ebudatara ndepụta okwu ka DVD iji ụfọdụ sobtaitel agbakwunye software.
4. Ọkụ na fim ndị ndepụta okwu ka DVD diski.
O yiri gị mkpa nza nke ngwaọrụ. Dabara nke ọma, ihe niile na-na-otu onye sobtaitel software ngwa - Wondershare Video Ntụgharị - bụ ike nke na-eme ihe niile ihe aga-eme kwuru n'elu. Ọ na-akwado sobtaitel faịlụ na * .srt, * .ass na * .ssa formats na-enyere gị aka tọghata, tinye na ọkụ ndepụta okwu ka DVD. Ya mere ihe niile ị chọrọ ime bụ ịkwadebe gị ndepụta okwu na-eso nkuzi n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: mbubata gị mgbasa ozi faịlụ
Mgbe nbudata na wụnye a usoro, dị nnọọ Ibu Ibu gị mgbasa ozi faịlụ site ikpuru-n-dobe.
Nzọụkwụ 2: ụzọ abụọ ịgbakwunye ndepụta okwu
Mgbe ọma Ibu Ibu gị DVD video, i nwere abụọ nhọrọ ịgbakwunye lekwasịrị ndepụta okwu.
Pịa "T" icon n'okpuru isi iyi faịlụ ọmụma, na mgbe ahụ họrọ "Tinye Ndepụta Okwu" nhọrọ Ibu Ibu gị sobtaitel nchekwa.
Pịa pensụl na akara ngosi ka ịnweta edit window wee họrọ "Ndepụta Okwu" taabụ. Pịa "+" Ibu Ibu lekwasịrị ndepụta okwu, na mgbe ahụ kụrụ "T" ịgbanwe font, agba, size, wdg
Nzọụkwụ 3: Malite ịgbakwunye ndepụta okwu ka DVD
Ugbu a niile ekpe na-see tọghata button na-amalite dee ndepụta okwu ka DVD. Nke a na usoro dị nnọọ oru oma, na-adịghị anya, ị DVD faịlụ na ndepụta okwu dị njikere iji.
Ebe a bụ mkpirikpi video nkuzi:
Download usoro ihe omume ịgbakwunye gị ndepụta okwu ka DVD tụsaara ugbu a:
Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ ka ịgbakwunye sobtaitel n'oge DVD playback, sobtaitel Player dị ka VLC pụrụ inye aka. Ọ natively akwado sobtaitel machie. Mgbe ị na-ekiri a DVD fim ma ọ bụ video, nanị aga Video / Ndepụta Okwu Track / Ibu Ibu File ịgbakwunye ndepụta okwu ka DVD / video.
> Resource> DVD> Olee otú iji Tinye ndepụta okwu ka DVD Movies ma ọ bụ Videos na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)